Maitiro Ekumisa Kudzima Mapurogiramu Pa iPhone: Hapanazve Homwe-Kubvisa! - Iphone
mvura yakakuvara iphone 6 kugadzirisa
zvinoita here kubaya iphone
iphone 6 nhema kurodha skrini
handina basa pafoni yangu
Iwe uri goti-dhaya? Kana zvirizvo, iwe unogona kunge uri butt-Deleter, futi. Kufona-bata kuri kupfuura kungochera muhomwe necheseri kwako - zvakare kunosanganisira kubata netsaona muchikwama kana kunyangwe muruoko rwako. Pane nguva zhinji apo ini ndakangobata yangu iPhone, uye ini ndinowana iyo ' Bvisa? ” meseji. Saka unodzivirira sei netsaona Deleting maapplication pane yako iPhone? Zvese zvaunoda ndeimwe yakapusa, yakapusa manomano.
Maitiro EmaApp Anobviswa Sei: X Inotaridza Iyo Spot
Imwezve mhosva yeapplication kubviswa ndeyevana vako uye yavo bhatani-mashing. Vana vanogona kuremerwa-nekubata nekubata kwavo, saka zviri nyore kwavari kuti vabatirire paapp kwenguva refu. Anwendung yakagadzirira kufambiswa kana kubviswa paunobatirira pairi kwemasekondi maviri. Maapplication anowana zvese wibbly-wobbly ne 'X' mukona yekumusoro kuruboshwe. Kana iwe ukabaya pane iyi 'X,' inozobuda yakafanana meseji seyangu skrini: Bvisa 'Netflix'?
iphone 6 isiri kuwana chiratidzo
Chinyorwa NezveNative Mapurogiramu
MaNative apps haakwanise kudzimwa uye haaratidze 'X' mukona. Native maapplication ndeaya anouya akaenzana neako iPhone uye akabatanidzwa mune iyo iPhone's software, inonzi iOS. Mienzaniso ye native maapplication ari Mamessage, Safari, Runhare, uye iBooks. Kana imwe yemapurogiramu ako emuno ikashaikwa, inongotamiswa kana kudzimwa mukati Zvirongwa -> General -> Zvibvumirano .
Kurambidzwa ishoko raApple rekutonga kwevabereki. Nguva yakawanda yenguva, vanhu netsaona vanozvivharira kunze kwavo iPhones. Kana izvozvo zvikaitika kwauri, verenga chinyorwa chedu kuna tsvaga kuti sei usina chaizvo bvisa iwo maapp uye uone kuti ungadzosa sei.
Hazvisi nyore kutaura kubva kune aya ma skrini, asi maapuro mune ese mapfuti ari kutenderera achitenderera mushure mekunge ndabata chigunwe changu pasi paapp. Mune iyo skrini kuruboshwe, unogona kuona 'X' pane mamwe maapplication, zvinoreva kuti ndinogona bvisa izvi zvishandiso pane yangu iPhone. Iyo skrini kurudyi iri kutenderera, asi sezvo pasina 'X,' ini haikwanise kudzima chero maapps zvachose.
Iyo yakapusa, Kwete-Kukakavara Kumisa Kudzima Mapurogiramu Pa iPhone: Dambudziko Ragadziriswa!
Iko kune yemenyu sarudzo ye Kurambidzwa pane yako iPhone, iyo ine toni yesarudzo dziri nyore dzekugadzirisa yako iPhone (uye zvimwe Apple zvishandiso), uye imwe yakadaro sarudzo kudzora kudzima maapplication.
chikafu chakapfava chekudya nesimbi
Iyi menyu inowanikwa nekuenda ku Zvirongwa -> General -> Zvibvumirano . Iko kune mutsara wekuchinja switch uye imwe yakanyorwa Kubvisa Mapurogiramu . Kana switch iyi iri (kuratidza girini), zvinoreva kuti unogona kusunungura maapp. Kana switch iyi ikadzimwa, haugone bvisa maapplication pane yako iPhone. Kuti ubvise maapplication zvekare mune ramangwana, iwe uchafanirwa kudzosera iyi ganhuriro kwechinguva, asi iwe unenge uchitonga zvakakwana paunenge uchida kudzima maapp.
Hapanazve Mapurogiramu Akadzimwa! Vana Vako Vanogona Kutamba Pasina Kunetseka.
Vana vako vanogona kubata maappuro sekureba sezvavanoda, vasina kunetseka nezvazvo netsaona Deleting maapplication pane yako iPhone . Vana vako vanogona kuvatenderedza uye kukukonzera kuti uende kunovhima, asi zvirinani kuti iwe uzive kuti hauna kurasikirwa chero maapplication!